News - R & D ngwaahịa ohuru
Uru atọ nke carbon fiber drive aro:
Nke mbụ, site n'echiche nke ike, ọ bụ ezie na eriri carbon bụ ihe eriri, ike nke ngwaahịa ahụ mgbe etolitere ya dị mma karịa nke ihe owuwu kachasị, ọkachasị ọ nwere ike dị mma na-ehulata ma nwee ike iguzogide ihe karịrị ígwè mbanye .
N'otu oge ahụ, ike ikuku ike nke carbon fiber bụ ọtụtụ oge nke ígwè, ike ịkwa osisi dịkwa mma karịa nke ọtụtụ ihe owuwu, nke na-egbo mkpa iji ike.
Carbon fiber bụ ezigbo ihe na-ebelata ibu. Njupụta ya bụ naanị 1.7g / cm3. Njupụta nke ihe eji arụ ọrụ na aluminom na ígwè bụ 2.7g / cm3 na 7.85g / cm3 n'otu n'otu. N'iji ya tụnyere, ihe nkedo a na-eme ka eriri carbon dịkwuo mma maka mmezu nke usoro ahụ
Fechaa, mgbe aru Ọdịdị na-amụmụrụ, ọ ga-enyere aka ịghọta na ike ịzọpụta na emission Mbelata nke ụgbọ ala.
N'ikpeazụ, ọsọ dị oke egwu na-ezo aka na ọsọ nke rotor na-ama jijiji. N'ozuzu, mgbe rotor na-agba ọsọ ọsọ dị egwu, oke ịma jijiji na-apụta, na eriri nke shaft na-abawanye nke ọma. Operationrụ ọrụ ogologo oge ga-ebute nrụrụ siri ike ma ọ bụ ọbụdị nkwụsị nke aro.
Osisi a na-agba agba nwere nnukwu ọsọ ọsọ, nke nwere ike izere nsogbu dị otú ahụ n'ụzọ dị irè.
Mgbe resin, na-agwọ ọrịa gị n'ụlọnga na ihe ndị ọzọ na-agwakọta na a ụfọdụ hà, na mgbe ahụ na carbon eriri ákwà na-infiltrated, mgbe a usoro nke gwọọ agwọ ọrịa, a carbon eriri mejupụtara ihe onwunwe, nke bụ nwa lattice ihe onwunwe na anyị nwere ike mgbe lee ụgbọ ala a. Ihe a nwere uru ndị ihe ọdịnala ọdịnala na-agaghị adakọ.
Kaosinadị, eriri ikuku carbon carbon anaghị arụkarị carbon carbon. Kama nke ahụ, ọkpụkpụ nke nnyefe nnyefe bụ nke mbụ nke ihe eji eme ihe eji eme ihe, na otu ụyọkọ nke carbon fiber filaments nke nwere ngụkọta n'ogologo nke 100 mita na-ọnya gburugburu gburugburu ígwè ahụ.
Post oge: Mar-30-2021